काठमाडौँ । अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले संसद् प्रमुखको हैसियतले सभामुखलाई चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रा डा केसीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुखलाई संसद्को बाँकी रहेको अवधिमा विधेयकलाई सहीरूपमा पारित गराउन आग्रह गर्दै भने, “केही राजनीतिक दल र सांसदहरू नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा आम विद्यार्थीको सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न सक्रिय भएका छन्, त्यसैले ऐन असफल पार्न लागेका छन् ।”
डा केसी आठ दिनदेखि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने माग राखी १३ औँ आमरण अनशनमा छन् ।
चिकित्सा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहे पनि दलहरुबीच सहमति हुन् नसक्दा पारित हुन् सकेको छैन । एमालेका सांसदहरुले समितिले पारित गरेको आधारमा नै विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने कांग्रेसले सम्बन्धनका विषयमा डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
काठमाडौँ । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको माग राखेर अनसनरत डा. गोबिन्द केसीले सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशको विरोध गरेका छन् । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले